पागल केटि” २ मिनेट समय दियर अवस्य पढ्नुहोला ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ ! – AB Sansar
October 8, 2020 February 27, 2021 adminLeaveaComment on पागल केटि” २ मिनेट समय दियर अवस्य पढ्नुहोला ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ !
यस्तो लाग्छ कि म कुनै गल्ति गरिरहेको छु त्यसैले दण्ड दिनको लागि हतारमा निर्णयको पर्खाईमा वसेजस्तै अपरिचितका परिवार हेरिरहेकाछन् ! वाउ ..मस्त जोडि कोहि हेरेर भन्दै थियो! आज म अपरिचित घरको अपरिचित कोठामा छु ,पुरुष शरिर म माथि आहाराको लागी ठुॅगिरहेको छ ! म रोईरहेको छु ! उसले आफ्नो भोक मेटायो!अनि जुकाले जस्तै ढाडिएर पर गएर सुत्यो’
April 5, 2021 April 5, 2021 Admin01
म्यान्मार सेनाको गोलीबाट नेपालीभाषी दम्पतीको मृत्यु